कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् जेठ ८ गतेको राशिफल « Dhankuta Khabar
समय : 11:25 PM
आज श्री शाके १९४१ बि.स. २०७६ साल ज्येष्ठ ८ गते बुधबार इश्वी सन् २०१९ मे २२ तारीख ज्येष्ठ कृष्णपक्ष चतुर्थी तिथी पूर्वाषाढा नक्षत्र साध्य योग बणीज करण चन्द्रमा धनु राशिमा आनन्दादि योगमा श्रीवत्स योग सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु जैविक विविधता दिवस – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे / धनकुटा खबर
पारीवारिक सम्बन्धमा भने सामान्य समस्या उत्पन हुनेछ । स्थाई क्षेत्रमा लगानि गर्ने समय रहेको छ । मान्यजनको सहयोग द्वारा भाग्योदयको योग रहनेछ । मित्रजनको अति सामीप्यतामा अहित साबित हुन सक्नेछ ।
गैर ब्यक्तिको बिस्वासमा गरीएका कार्यमा सजग रहनुहोला सामान्य अपजस को सम्भाबना रहेकोछ । शारीरिक अस्वस्थाको सामना गर्नु पर्नेछ । बाणीका कारण निकटतम ब्यक्तिहरु सगँको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुनेछ ।
ब्यापार ब्यवसाय मा भने सामान्य ढिलाईको सम्भाबना रहेको छ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोगमा कमि आएको महसुस हुनेछ । पारीवारिक झोर झमेला को सामना गर्नुपर्ला। शारीरिक आलस्यताले सताउन सक्नेछ ।
अरुको कार्य लापरबाहि को प्रतिफल तपाईलाई आईपर्न सक्नेछ । आय आर्जनका लागी भने समय उत्तम रहेको छ । साजेदारी ब्यवसायमा मनग्य लाभ मिल्नेछ । गैर ब्यक्तिको पुर्ण बिस्वास नर्गनु राम्रो हुनेछ ।
धृष्टता पुर्ण बाणीका कारण निकटतम ब्यक्तिहरु सगँको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुनेछ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोगमा कमि आएको महसुस हुनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ ।
मानसिक चन्चलताका कारण मित्रजन सगँको सम्बन्धमा फाटो आईपर्नेछ । जिबन साथीको सहयोमा गरीएका ब्यापार ब्यवसायमा लाभ प्राप्त हुनेछ । नयाँ लगानि जन्य कार्यमा साबधानि अपनाउनु राम्रो हुनेछ ।
सामान्य कार्य सम्पादनमा अधिक परीश्रको सम्भाबना रहेको छ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । सन्तान सम्बन्धी समस्याले सताउन सक्नेछ । सभासम्मेलनमा सरीक हुने तथा पद प्रतिष्ठामा बृद्धिको योग रहेको छ ।